ပန်းမြို့တော်သို့တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ပန်းမြို့တော်သို့တစ်ခေါက်
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 13, 2011 in Local Guides, Photography | 14 comments
ပူလောင်အိုက်စပ် ဖုံထူ ခြင်ကိုက် ဆိုတဲ့မန္တလေးမြုိ့အရှေ့မြောက်ဘက် 41မိုင်လောက်အကွာမှာ
အရပ်အခေါ် ပန်းမြို့တော် တောင်လှေခါးမြို့တော် ချယ်ရီမြေ
အခုလက်ရှိအခေါ် ပြင်ဦးလွင်ကို အလည်တစ်ခေါက်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အရင်ကတော့ လမ်းကျဉ်းကျဥ်းလေးကို အသွားအပြန်အသုံးပြုတော့
ကားမောင်း ဆိုင်ကယ်စီး တော်ရုံကျွမ်းကျင်မူ့နဲ့မေမြို့ကိုမတက်နိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်ကား ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ အလွယ်တကူတက်လို့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။.
အုန်းချော ကျောက်မီး ထုံးဘို ရွှေစာရံ စတဲ့နေရာတွေကိုကျော်တာနဲ့တောင်တက်လမ်းစပါတယ်။
စတက်တက်ခြင်းမှာနည်းနည်းလေးမတ်တဲ့ အတက်ကလေးကိုကျော်တာနဲ့ ရူ့ခင်းသာဆိုတဲ့ဗျူးပွိုင့်ကိုရောက်ပါတယ်။
လူတွေကလဲ အစားစားရအောင် ခဏနားတဲ့ နာမယ်ကျော် 21မိုင်ကိုရောက်ပါတယ်။
21မိုင်အတွက်မှာ သာယာလှတော့ ကျွန်းတောအုပ်ကလေးရှိပါတယ်။
မြေပြန့်မှာ မရနိုင်တဲ့တောရနံ့တောင်ရနံ့ တကယ်ကိုစိတ်ကိုကြည်နူးစေပါတယ်။
ဆက်သွားရင် ဒေသထွက်သီးနှံတွေပန်းတွေရောင်းတဲ့ အောင်ချမ်းသာဈေးတန်း။
နောက်တော့ အနီးစခန်း (အဲဒီကနေ မြေလမ်းကလေးအတိုင်း အရှေ့ဘက်တက်သွားရင်
(ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အဲဒီဘုရားကို အပြန်မှဝင်မယ်စီစဉ်ထားပေမယ့်
ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မြို့အ၀င်တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ ဘုရားစောင်းစောင်းလေးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်းလေးက ဆိုင်ကယ်နဲ့တက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးမောင်းသွားရင် 2နာရီလောက်မောင်းတာနဲ့
နာမယ်ကျော် ဆွယ်တာတွေရောင်းတဲ့ ယမုံနာတို့ ပြင်ဦးလွင်စတားတို့
မလိုင်မုန့်တွေရောင်းတဲ့ ရှမ်းမ် တို့ စိန်ကိတ်မုန်တိုက်တို့နားကိုရောက်ပါတယ်၊
ပြီးရင်နွားနို့စစ်စစ်တစ်ခွက် မနက်စာဘိုက်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ လားရှိုးလမ်းမကြီးအတိုင်းခရီးဆက်
ပြည်တော်ချစ်ဘုရား ပါတ်ဝန်းကျင်ကတော့ သာယာလှပါတယ်
ဒီလမ်းအတိုင်းဆင်းသွားရင် ပွေးကောက်ရေတံခွန်ကို တန်းရောက်သွားတာပါဘဲ၊
ပွဲကောက်ရေတံခွန်က သဘာဝသစ်မြစ်ဆုံကြီးရဲ့ ပန်းပုလက်ရာ
အနောက်ဘက်ကရေတံခွန်အသေးလေး ဒီနေရာမှာရေဆင်းကစားလို့ရတယ် ဘောကွင်းငှားပြီးစီးလို့ရတယ်။
ပွဲကောက်ရေတံခွန်က ဘုရား အရှေ့ဘက်ကရေတံခွန်ဒီနေရာကဓါတ်ပုံရိုက်လို့လှတယ်လေ
လမ်းတစ်နေရာက ဖြူဖွေးလှပနေတဲ့ ယူကလစ်ပင် အရပ်က အမြင့်ကြီးနော်
အမျုိးသားဥယျာဉ် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ထဲက မော်ဒန်လွန်အင်စတော်လေးရှင်း နှစ်သက်သလိုအနက်ဖွင့်ပါ
သာယာသောမြင်ကွင်း စိမ်းမြသောမြက်ခင်း အေးမြတဲ့ရေပြင်………….
ဥရောပဆန်တဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့ထင်းရူးပင်တွေကချွန်မြလှပ နန်းမြင့်မျှော်စင် ရေပြင်နဲ့စေတီ
ချစ်စဖွယ် ငန်းမောင်နှံ ရေထဲကချစ်အ၇ိပ်လေ
ငါကအထီးကျန်ဖြစ်နေတာ မင်းတို့ထက်အများကြီးကြာပေါ့လို့ အလွမ်းတွေပြိုင်ကြပါသတဲ့
ငါ့လိုဘယ်သူလှသလဲတဲ့ ဒါနဲ့ဘဲ ကန်တော်ကြီးကပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ရူ့ခင်းသာအလှ တောင်အက်ွယကမြစ်တစင်း ကတော့မြစ်ငယ်မြစ် ခေါ်တဲ့ဒုဌ၀တီ
ပြင်ဦးလွင်ကတော့ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာလည်းရူခင်းတွေတော်တော်လှတယ်။ အသီးအနှံတွေပေါတယ်။ ဆွယ်တာတွေပေါတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ ကိုပေါက်မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေါ့………..
ဟုတ်ပါတယ် ကိုပေါက်ရေ။ခုလို ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးတွေ့ ရတော့ မရောက်ဖူးသေးသူတွေလဲရောက်ဖူးသလိုမြင်ရတွေ့ ရတာပေါ့နော်။ရာသီပြောင်းနေချင်သူတွေဆို အိမ်တောင် ဝယ်ထားကြသေးတယ်နော်။အပူကိုရှောင်ကြတဲ့သဘောပေါ့နော်။မမေ တယောက်ကတော့ မရောက်ဖူးဘဲဇွတ်ပြောနေပါပီ။ဘယ်လို ဆွယ်တာတွေ ပေါတာလဲ ပြောပြပါဦး။သိချင်လို့ မေးတာနော်
အစ်ကိုပေါက်ပြတဲ့ ပွဲကောက် ရေတံခွန်ဘုရားကို
မေမြို့မှာ ဂေါ်ရခါးမလေးတွေ အားကီးလျှောလယ်ပေါဒယ် ဟုတ်ယား… ရှလွတ် ရှလွတ်…။
ဂေါ်ရခါး တွေ ရဲ့ ကွတ်ခရီး ဓါးကောက် ကြီး တွေ လည်း ပေါဒယ်
မေမြို့ က ချစ်တီး ထမင်းဆိုင် က တော့ စားကောင်းတယ်
မေမြို့ရှု့ခင်းသာကနေ ဆင်းလာတော့ ဟိုးးးးးးးး အဝေးက မြစ်လေး ကွေ့ကွေ့ကောက် စီးနေတာ မြင်ရတာ အရမ်းလှတယ်။ လေးပေါက်ရေ လမ်းခွဆုံပဲ ဘယ်နားတော့မသိဘူး ထမင်းဆိုင် အရမ်းစားကောင်းတယ်။ ဟင်းခွက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ဟင်းတွေများ အများကြီးပဲ ဟင်းခွက် ၂၀ကျော်မယ်။ တောစာလေးတွေလေ။ ခရီးသွားလို့ ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းစားတိုင်း စားခဲ့ဖူးတဲ့ မေမြို့က ထမင်းဆိုင်လေးကို အမြဲသတိရတယ်။ နောက်များ ရောက်များရောက်ခဲ့ရင် ထပ်သွားပြီး စားဦးမယ်။ လေးပေါက် တင်တဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး ထပ်သွားချင် လာပြီ။
ပြင်ဦးလွင်ရောက်လို့ နာရီစင်ကိုကျော် နောက်ထပ် မီးပွိုင့်တစ်ခုကိုထပ်ကျော်ပြီးရင်
ပြင်ဦးလွင်က နာမယ်ကျော် ဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ သိုးမွှေးဆွယ်တာတွေဝယ်လို့ရတဲ့ဆို်င်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ကဲ သင်သိပြီမဟုတ်လား ……………………
လမ်းကောင်းသွားတာတော့ ၀မ်းသာစရာပဲ …..ဒါပေမဲ့ ပုံထဲကြည့်ရတာ ရေစီးဆင်းဖို့ မြောင်းတွေဖေါက်သင့်တယ် ထင်တာပဲ တော်ကြာ ရေတိုက်စားလို့ ရှိတဲ့ ကတ္တရာလေးပါသွားမှာဆိုးရတယ်.. လမ်းရဲ့နုတ်ခမ်းသားတွေကိုလဲ ကွန်ကရစ်နဲ့ တစ်ပေအကျယ်လောက် အနားသတ် ခင်းလိုက်ရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်……….
နာမယ်ကြီးးပြီးကောင်းတော့ တကူးတက သွားစားတတ်ကြပါတယ်။
အဲတော့ ကျနော်တို့သွားစားရင် အန်ကယ်ကြီးလိုက်မစားနဲ့နော်
လေးပေါက် ပုံတွေ ဒီတခေါက်ပိုပိုပြီးလှလာတယ်.. လေးပေါက် လက်ရည်တွေ တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီ …
ပုံတွေ တင်ထားတာ နည်းနည်းနောနောပဲနော်လေးပေါက် … ။
ရှုခင်းတွေ အရမ်းသာယာတယ်.. သွားလည်ချင်တယ်အချိန်ရလျှင်ဖြင့်